Ixesha kunye nabahlobo 14
Ilungelo lokushicilela, i-1908, nguHW PERCIVAL.
Ngaba ukho umntu owaziyo ukuba iziko lijikeleze phi ilanga kunye neeplanethi zethu zibonakala ngathi ziyajikeleza? Ndifundile ukuba inokuba yiAlcyone okanye iSirius.
Izazi ngeenkwenkwezi azikagqibi ngelo xesha ukuba yeyiphi eyona ndawo iphambili kwindalo ye-toto. Nganye yeenkwenkwezi ekucingelwa ukuba ziziko, emva kophando kuye kwafunyanwa ukuba ziyahamba. Lo gama izazinzulu zibambelele kuphela kwicala leenkwenkwezi, azinokwazi ukufumana embindini. Inyani yile, akukho nanye kwezi nkwenkwezi zibonwayo liziko lendawo yonke. Iziko lendawo yonke alibonakali kwaye lingafunyanwa ngeeteleskopu. Oko kubonakalayo kwindalo yonke kodwa yinxalenye encinci yendalo yokwenene, kwinto enye leyo ebonwa ngumntu, umzimba wakhe wenyama, yinxalenye encinci yendoda. Umzimba wenyama, nokuba ngowomntu okanye owendalo iphela, unomgaqo osisiseko wokubamba la manyala abonakalayo emzimbeni. Ngalesi siseko sokwakha kusebenza omnye umgaqo, umgaqo wobomi. Umgaqo wobomi udlulela ngaphaya kwemilinganiselo yomzimba kunye neyokwakha kwaye ugcina onke amasuntswana omzimba wayo yonke imizimba ekuhambeni. Umgaqo wobomi ngokwawo ubandakanyiwe kumgaqo-nkqubo omkhulu othi, kwingqondo yomntu, awunakuze ube nesithuba. Le mfundo ibanjwa ngababhali beenkolo kunye nezibhalo njengoThixo. Yingcamango yomntu wonke, ebandakanya zonke izinto ezibonakalayo, ezibonakalayo okanye ezingabonakaliyo. Inobukrelekrele kwaye inamandla onke, kodwa ayinamalungu ngendlela efanayo ukuba indawo ayinanxalenye. Ngaphakathi kuyo indalo ebonakalayo iyonke kwaye zonke izinto ziphila kwaye zihamba kwaye ziyabakho. Eli liziko lendawo yonke. "Iziko likuyo yonke indawo kwaye ujikeleze akukho ndawo."
Yintoni eyenza intliziyo ibethe; Ngaba ukutshatyalaliswa kwamagagasi ukusuka elangeni, kwintoni na ngokuphefumla?
Ukujikeleza kwelanga elangeni akubangeli ukuba ukubetha kwentliziyo, nangona ilanga linento yokwenza nokujikeleza kwegazi kunye nabo bonke ubomi emhlabeni. Omnye unobangela wokubetha kwentliziyo sisenzo sokuphefumla egazini njengoko kuqhagamshelwa kwi-alveoli yamaphaphu, umoya-kumagumbi emiphunga. Eli linyathelo lokuphefumla emzimbeni wegazi lomzimba, isikhululo esiphakathi sentliziyo. Kodwa isenzo sokuphefumla asisiyiyo eyona nto ibethe ukubetha kwentliziyo. Oyena nobangela ubukho bomzimba we-psychic organic engena emzimbeni xa uzalwa kwaye uhlala ngexesha lokuphila komzimba. Eli qela lobuchwephesha linxulumene nelinye elingekho emzimbeni, kodwa elihlala kwindalo yomzimba, lijikeleze kwaye lisebenze emzimbeni. Ngesenzo kunye nokusebenzisana kwezi zinto zimbini, ukuphefumla ngaphakathi nangaphandle kuyaqhubeka ngobomi. Intlola yengqondo emzimbeni ihlala egazini kwaye ikwayiyo ngqo le nto yezengqondo ephilayo egazini ukuba intliziyo ibangelwa.
"Intliziyo yomntu" sisifundo esikhulu; "Ukuphefumla" ngumbandela omkhulu; okuninzi kungabhalwa ngabo. Ukuze sikwazi ukuphendula icandelo lokugqibela lombuzo: "yintoni kwakhona malunga nokuphefumla" kufuneka saziswe "yintoni ngayo."
Ulwalamano olunjani phakathi kwentliziyo kunye nemisebenzi yesondo-nokuphefumla?
Intliziyo yomntu inokutshiwo ngokufanelekileyo ukuba yandisa umzimba wonke. Naphi na apho imithambo imithambo, imithambo okanye ii-capillaries, kukho ukushwabana kwentliziyo. Inkqubo yokujikeleza kwegazi kuphela komhlaba wokusebenza kwegazi. Igazi liyindlela ephakathi yokuphefumla yokunxibelelana phakathi kwamalungu omzimba kunye nomzimba. Igazi, ke, liyisithunywa esiphakathi komphefumlo kunye nezifo zesondo. Siphefumlela kwimiphunga, imiphunga idlulisela umoya egazini, isenzo segazi siqinisa amalungu ezesondo. Kwi wokuhlela kwi-Zodiac, V., ebonakale “kwiLizwi,” Vol. I-3, iphe. 264-265, Umbhali uthetha ngendlala yeLuschka, ilungu elithile lomnqweno, njengeminqweno yesini. Apho kuchazwe ukuba ngokuqhekeza ngakunye igazi liyanyuswa kwaye lenza kumhlaba weLuschka kwaye ukuba eli lungu liyavumela amandla adlala ngalo ukuba aye ezantsi okanye phezulu. Ukuba yehlela ezantsi iphumela ngaphandle, isebenza ngokubambisana nelungu elichasene nelinye, eliyi-virgo, kodwa ukuba ithe yaya phezulu yenziwa ukuba ikwenze oko ngokuzithandela kwaye indlela yayo isendleleni yomqolo. Intliziyo sisikhululo esiphambili segazi, ikwayindawo yokwamkela apho zonke iingcinga ezingena emzimbeni zifumana abaphulaphuli ngengqondo. Iingcamango zesimo sokwabelana ngesondo zingena emzimbeni ngamalungu esini; basuka bafake isicelo sokungena entliziyweni. Ukuba ingqondo ibanika abaphulaphuli entliziyweni kwaye ibonwabisa kwaye ijikeleze igazi liyenyuka kwaye igazi liqhutywa kumalungu ahambelana nengcinga. Ukujikeleza okwandisiweyo kufuna ukuphefumla okukhawulezayo ukuze igazi lihlanjululwe ngeoksijini ephefumlayo emiphungeni. Ifuna malunga nemizuzwana engamashumi amathathu ukuze igazi lidlule lisuka entliziyweni liye kwimithambo yomzimba libuyele ezingontsini zomzimba libuyele emithanjeni, lenze umjikelo omnye opheleleyo. Intliziyo kufuneka iphole ngokukhawuleza kwaye umphefumlo ube mfutshane xa iingcinga zokwabelana ngesondo ziyonwabisa kwaye amalungu esini evuselelwa ligazi eliphuma entliziyweni.
Izifo ezininzi eziphilayo kunye nezikhalazo zenzondo zibangelwa yinkcitho engenamsebenzi yamandla obomi ngeengcinga zesini; okanye, ukuba akukho nkcitho, ngokuthi iphinde iphinde ibuyele kumzimba wonke wamandla obomi obuya kumalungu ombuzo kunye nokubuya kwegazi kujikeleze amalungu ezesondo. Amandla okuvelisa aselwayo aze abulawe ngesiphulelo. Iiseli ezifileyo zidlulela egazini elizisasaza emzimbeni. Bangcolisa igazi kunye nezifo amalungu omzimba.Ukuhamba komphefumlo sisalathiso semeko yengqondo kunye nerejista yeemvakalelo zentliziyo.
Ingaba inyanga ifana njani nomntu kunye nobomi emhlabeni?
Inyanga inomtsalane wamandla omhlaba kunye nazo zonke izinto zomhlaba. Ubungakanani bomtsalane buxhomekeke kwisigaba senyanga, ukuma kwayo emhlabeni, nakwixesha lonyaka. Umtsalane wayo womelele kwi-ikhwetha kwaye ubuthathaka kwizibonda. Impembelelo yenyanga ilawula ukunyuka nokuwa kwesithako kuzo zonke izityalo kwaye ichonge amandla kunye nokusebenza kakuhle kwezimpawu zonyango kwizityalo ezininzi.
Inyanga ichaphazela umzimba we-astral kwiminqweno yezilwanyana kunye nomntu, kunye nengqondo emadodeni. Inyanga inecala elihle nelibi kubudlelwane bayo nomntu. Ngokubanzi ukuthetha icala elibi kuboniswa ngezigaba zenyanga kwixesha lokuya kwalo; icala elihle lidityaniswe nenyanga ukusuka kwixesha elitsha ukuya enyangeni epheleleyo. Oku kusetyenziswa ngokubanzi kuguqulwa ngamatyala umntu ngamnye; kuba kuxhomekeke kulwalamano lomntu kumqondo wakhe wengqondo nangokwasemzimbeni ukuya kuthi ga kwinqanaba inyanga elinokuthi libe nefuthe kuye. Zonke iimpembelelo, nangona kunjalo, zinokuchasene nentando, ukuqiqa, kunye nengcinga.
Ngaba ilanga okanye inyanga zilawula okanye zilawula ixesha lokugaya? Ukuba akunjalo, kuthini na?
Ilanga alilawulwa lixesha; ngumbandela wolwazi oluqhelekileyo ukuba ixesha lokuya esikhathini lihambelana nezigaba ezithile zenyanga. Umntu ngamnye obhinqileyo unxulumene nenyanga ngendlela yokwenza kwakhe emzimbeni nasengqondweni; njengoko impembelelo yenyanga ibangela ukuba i-oviation ilandele ukuba isigaba esifanayo senyanga asizisi ixesha kubo bonke abasetyhini.
Inyanga ibangela ukuba le ntsholongwane ivelise ukukhula kunye nokushiya i-ovary. Inyanga inefuthe elifanayo kwindoda. Inyanga iphembelela ukumiswa kwaye yenza ukuba kungabikho ngamaxesha athile, kwaye ichaze ixesha lokuma kunye nomzuzu wokuzalwa. Inyanga yeyona nto iphambili ekumiseleni la maxesha, kwaye inyanga ikwayeyona nto ibaluleke kakhulu ekuphuhlisweni kwesibeleko, kuba umzimba womama kunye nowesibeleko ngamnye unxulumene ngqo nenyanga. Ilanga linefuthe nemisebenzi yesizukulwana; Impembelelo yayo yahlukile kuleya yenyanga, ekubeni inyanga inika umgangatho wemagneti kunye nefuthe kumzimba we-astral kunye nolwelo, ilanga linento yokwenza nombane okanye iimpawu zobomi bomzimba, kunye nesimo, indalo kunye ubushushu bomzimba. Ilanga nenyanga ziphembelela indoda kunye nebhinqa. Impembelelo yelanga inamandla endodeni, enyangeni emfazini.